Omenala Switzerland: Ọtụtụ ihe karịrị chocolate na ese | Akụkọ njem
Louis Martinez | 25/12/2021 13:13 | omenala, Switzerland
na Ọdịbendị Switzerland Ha na-anabata, maka ọtụtụ akụkụ, na Central Europe ma ọ bụ omenala ụmụ amaala nke na-emetụta ọtụtụ akụkụ nke ndụ na mba ahụ. Ebe ndị a sitere na ọzụzụ atụrụ ruo na mmemme site na gastronomy, omume omume ma ọ bụ egwu.
N'agbanyeghị obere nha ya, mba Switzerland nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke omenala ndị a kanyere n'ụzọ nke ndị bi na ya na, ma eleghị anya, ga-eju gị anya. Ọtụtụ na-ahụkarị na Europe ndị ọzọ dị ka na-eme ekeresimesiebe ndị ọzọ bụ ụmụ amaala n'ezie ma nwee mgbọrọgwụ na mba gara aga. Mana, na-enweghị mmasị ọzọ, anyị ga-egosi gị ụfọdụ omenala Switzerland kachasị mma.
1 Omenala Switzerland: site na asụsụ ruo gastronomy
1.1 Asụsụ Switzerland
1.2 Egwu pụrụ iche nke omenala Switzerland
1.3 Ememme ahụ, dị mkpa na omenala Switzerland
1.4 Nkà Switzerland
Omenala Switzerland: site na asụsụ ruo gastronomy
Anyị ga-amalite njem anyị na omenala Switzerland site n'ịgwa gị gbasara asụsụ ha. Mgbe ahụ, anyị ga-anọgide na-ele anya n'akụkụ ndị ọzọ dị ka egwu ma ọ bụ oriri na ọṅụṅụ na, n'ikpeazụ, anyị ga-ejedebe na-elekwasị anya na-atọ ụtọ gastronomy nke Switzerland obodo.
Mpaghara asụsụ Switzerland
N'ihi ọnọdụ ala ya, Switzerland bụ ebe omenala Europe dị iche iche na-ejikọta. N'ihi nke a, o nwere asụsụ gọọmentị atọ na nke ọzọ ghọtara nke ọma na-anabata mmalite nke ndị bi na ya.
A na-akpọ ọtụtụ asụsụ German Switzerland, nke na-ekwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasenti iri isii na anọ nke ndị bi na ya. Ọ dị ezigbo mkpa na mpaghara ugwu, ọwụwa anyanwụ na etiti obodo. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ netwọk redio na telivishọn na-eji ya.
A na-esochi ya ọnụ ọgụgụ ndị ọkà okwu site Frances, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasenti iri atọ na itoolu nke ndị bi na ya na ọtụtụ ndị nọ n'ebe ọdịda anyanwụ nke mba ahụ na-eji. Ke adianade do, na mpaghara nke Romandie A na-echekwa olumba Franco-Provencal, dịka vaudois ma ọ bụ neuchatelois.
Asụsụ nke atọ nke Switzerland bụ italiano, nke na-eji pasent iri na ise nke ndị bi na ya na nke, n'ụzọ ezi uche dị na ya, bụ nke kachasị na ndịda nke mba ahụ. Enwekwara olumba Lombard: nke tesinese.
Okwu pụrụ iche anyị ga-emerịrị ka ị bụrụ ihe pụrụ iche romansh. Ọ bụkwa asụsụ gọọmentị, ọ bụ ezie na akwụkwọ gọọmentị achọghị iji ya. A na-asụ ya na canton nke Graubünden na ngụkọta ndị mmadụ na-eji ya na-anọchi anya 0,6% nke ndị bi na ya. Ị ga-enwe mmasị ịmara na ọ bụ asụsụ Romanesque metụtara Ladino na Friulan nke a na-asụ n'ebe ugwu Ịtali, n'agbanyeghị na ọ malitere na phonologically karịa ndị a.
Egwu pụrụ iche nke omenala Switzerland
Ndị egwu dị iche iche na-eji mpi alpine eme egwu
Anyị ekwesịghị ịgwa gị na na Switzerland ị na-anụ otu egwu dị na Spain. Francia ma ọ bụ United States. Mana, dị ka mba ndị a, o nwekwara egwu ọdịnala ya, ị ga-ahụkwa ya nke ukwuu.
Ngwá ọrụ kacha mma nke obodo bụ oku mpi alpine. Ejiri osisi mee ya na ogologo ya dị n'etiti mita 1,5 na 3.60, ọ kwụ ọtọ ma nwee njedebe ọkụ. Ọ na-ekupụta ụda kwekọrọ ekwekọ yiri nke ụda opi, ma mmalite ya dị nnọọ ochie.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ malitere na narị afọ nke XNUMX, mgbe a na-eji ya na-akpọ ehi na mpaghara Alpine nakwa iji kparịta ụka n'etiti ndị ọrụ ugbo n'onwe ha. Ma a na-ejikwa ya akọwa egwu alpine ọdịnala na, na-achọsi ike, ọ nwere ihe yiri ya na ngwá ọrụ ndị ọzọ sitere na Pyrenees, Carpathians na ọbụna ugwu Andes na South America.
N'aka nke ọzọ, ndị Switzerland nwekwara egwu ọdịnala. Ọ bụ nke a ma ama tyrolean. A na-eji ya mara, dị ka ị hụla ọtụtụ oge, site na mgbanwe mberede na ụda, sitere na ala ruo elu n'ụdị falsetto. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị na Switzerland. Ọ bụkwa nke omenala Alpine n'ozuzu ya, ya mere a na-atụgharị ya na Austria, Northern Italy na ọbụna Germany. Mana, n'ụzọ na-achọsi ike, enwere ụdị egwu ndị ahụ dị anya dị ka Scandinavia ma ọ bụ Central Africa.
Ememme ahụ, dị mkpa na omenala Switzerland
Obodo Switzerland na-eme ememe ya Ememme mba 1291 Ọgọst. Ọ na-echeta ihe a na-akpọ Federal Pact nke XNUMX, bụ ebe obodo atọ dị ugbu a kwetara ịmepụta ọnọdụ dị mkpa maka ịdị n'otu dị ka mba. N'ime ókèala ya niile, a na-eme mmemme mmemme. Ma ihe na-achọsi ike maka ememe ahụ bụ na a na-ahapụ ya ka ọ gbaa onye ọ bụla ọkụ.
Ememe ọzọ dị oke mkpa na Switzerland metụtara ya transhumance nke ehi. Ọ bụ ezie na, n'ezie, anyị kwesịrị ịgwa gị banyere ezumike abụọ. N'ihi na ha na-eme na mmalite okpomọkụ na n'oge mgbụsị akwụkwọ. N’ụbọchị nke mbụ, ndị ọzụzụ atụrụ na-akpọrọ ehi ha gaa n’ugwu Alpine ka ha rie nri n’efu, ebe nke abụọ, ha na-eweghachi ha n’ụlọ anụ. Ma, n'ọnọdụ abụọ ahụ, a na-eji okooko osisi na mgbịrịgba chọọ ha mma ma na-agbagharị n'usoro.
N'aka nke ọzọ, n'etiti omenala Switzerland nwekwara mmemme ndị ọzọ nke ọdịdị obodo, mana nke dị oke mkpa na mba ahụ dum. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ikpe nke isi ọgazị na Sursse, nke anyị agaghị agwa gị okwu nke ọma; nke Kanival Basel ma ọ bụ nke Ememme winegrowers na Vevey, nke esonyela na UNESCO Heritage Cultural Heritage of Humanity.
Elekere akpa akpa Switzerland
Tinyere mma akpa ndị a ma ama, mba Switzerland nwere ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ama nke Gall St, nke malitere na narị afọ nke iri na asaa ma pụta ìhè karịsịa maka ọrụ ya na owu na linen. A pụkwara ikwu otu ihe ahụ Neuenburg bobbin lace na ụlọ ọrụ silk na Zurich, malitere na XIV.
Dị iche bụ omenala osisi ọkpụkpụ nke Brienz, ihe si na ya pụta bụ Swiss Museum of Carvings and Sculptures, yana onye oru ugbo ite nke Bern, nke malitere na narị afọ nke XNUMX ma nwee nkwado mba ụwa.
Mana, ọ bụrụ na nka nka Switzerland pụtara ihe, ọ bụ n'ihi elekere ha, nke ghọrọ otu n'ime ụlọ ọrụ mba dị iche iche. Agbanyeghị, ọ bụghị omenala Switzerland. A kpọgara ya n'obodo Gin Ndị Huguenot bụ́ ndị gbabara na ya na narị afọ nke XNUMX.
N'oge na-adịghị anya nka a gbasara na mpaghara ndị ọzọ dịka Neuenburg, Ebe e kere ihe ịtụnanya dị ka elekere akpa Taschenuhren ma ọ bụ elekere pendulum. Kemgbe ahụ, ndị Switzerland etinyela onwe ha dị ka ndị na-emepụta ihe ndị a dị elu, ọ bụ ezie na ha erutewokwa ihe dị ịrịba ama dị ka ihe mgbochi mmiri mbụ ma ọ bụ elekere quartz mbụ. Nke ukwuu bụ ugwu Switzerland dị ka ndị na-eme nche nke na a tụrụ aro itinye aka ha n'ihe nketa a na-apụghị ịhụ anya nke mmadụ.
Otú ọ dị, omenala ọzọ nke mba Switzerland nke a mụrụ n'otu oge ahụ dị ka onye na-ekiri nche na-amachaghị nke ọma. Anyị na-ekwu maka ya imepụta akpaaka na igbe egwu. N'ihe dị ka 1770 ụmụnna Jaquet-Droz Ha wepụtara android atọ tụrụ anya na Europe niile.
Maka akụkụ ya, igbe egwu bụ n'ihi Antoine mmasị, onye nyere ya na 1796 nye Geneva Society of Arts. Ma n'oge na-adịghị anya mmepụta ya gbasaa na mpaghara ndị dị ka Sainte-Croix o Gin.
Otu efere raclette
N'ikpeazụ, anyị ga-akwụsị njem anyị na omenala Switzerland site n'ịgwa gị gbasara gastronomy. Banyere ya, ihe yiri ihe anyị kọwara banyere elekere na-eme. A ma ama n'ụwa niile chọkọleti nke obodo Switzerland.
Agbanyeghị, dịka ị maara, ngwaahịa a sitere na America na narị afọ nke XNUMX. N'ọnọdụ ọ bụla, Switzerland chocolate n'oge na-enweta mba ama ekele maka Ezi ntụziaka dị ka ngwakọta ya na Alpine mmiri ara ehi, n'ihi Daniel pita, ma ọ bụ chocolate agbazekere site Rodolphe Lindt.
Ngwaahịa Switzerland ọzọ dị mkpa bụ cheese ahụ. Ụdị ya dị ọtụtụ nke na ị nwere ike ịga obodo na-anwale ha (ihe dị ka narị anọ na iri ise). Ọtụtụ n'ime ụta bụkwa n'ihi mmiri ara ehi mara mma sitere na ìgwè ehi Alpine. Otu n'ime cheese ndị kacha ewu ewu na mba ahụ bụ Gruyere, ihe na-esi ísì ụtọ Onye na -etinye ihe ma ọ bụ sbrinz, dị jụụ ụdị.
Site na ngwaahịa a na-abịa otu n'ime ụdị efere nke Switzerland: na fondue, nke na-abụghị ihe ọzọ karịa chiiz gbazere nke a na-eri site n'itinye iberibe achịcha e ji ndụdụ pụrụ iche jide n'ime ya. A na-etinye ya na ite seramiiki a na-akpọ caquelón. Ụdị variant bụ raclette, nke nwere, na mgbakwunye na cheese gbazere, poteto esighị ya, eyịm, cucumbers, mmanya na mọstad.
Maka akụkụ ya, nke ọgwụ mgbochi ọrịa Ọ bụ nri na-agụnye poteto gratin, macaroni, yabasị, ude na cheese ma were ihe ịchọ mma nke apụl a gbajiri agbaze. Na nke rosti Ọ bụ ụdị omelette nduku, ma na-enweghị akwa, ebe ọ na-ejikọta ya na starch nke tuber n'onwe ya.
Maka nri ụtụtụ Switzerland, ikekwe ihe kachasị ewu ewu bụ ihe a na-akpọ birchmüesli, nke mejupụtara ihe ọṅụṅụ lemon, mmiri ara ehi na-esi ísì ụtọ, ọka a mịrị amị, apụl grated na almọnd ma ọ bụ hazelnuts.
Maka akụkụ ya, nke zürcher geschnetzelte Ọ bụ anụ ehi jiri ude ihendori, mushrooms na rösti na-enye ya. Na nke biya Ọ bụ ụdị sausaji German nke Switzerland. Banyere ihe ọṅụṅụ, ndị Ihe ọ juiceụ Appleụ apụl Ọ na-ewu ewu nke ukwuu yana cider na mmanya.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime Ọdịbendị Switzerland. Ma e nwere ndị ọzọ na-achọsi ike dị ka ndị metụtara ha ekike mpaghara; oku owuwe ihe ubi ezumike, taa belata na ezumike nke sausaji na-eri na mmanya na-aṅụ mmanya, ma ọ bụ pụrụ iche mba egwuregwu nke mba: na hornussen, nke mejupụtara, n'ikwu okwu n'ụzọ sara mbara, nke ịtụba diski dị ka o kwere mee. N'ịmara ọdịnala ndị a niile nke obodo Switzerland, naanị ị ga-aga ileta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Switzerland » Ọdịbendị Switzerland